आज श्रावण १९ गते मंगलबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! - kageshworikhabar.com
आज मिति वि.सं.२०७८ साल श्रावण १९ गते । सोमबार । तपाईंको राशिफल
कुनै पनि काम गर्दा अरुको पनि सुझाव लिनु उचित हुनेछ । परिवारका सदस्यको काममा समान व्यवहार अपनाउनु उचित हुनेछ। बोलीमा बिषेस ध्यान दिनुहोला अन्यथा विवादमा पर्न सकिन्छ । आनवसेक खर्च हुनसक्छ, सचेत रहनु होला ।
धार्मिक कार्यमा मान्न जानेछ साथै धार्मिक आयोजना गर्ने योग बनेको छ । आर्थिक लाभ हुनेछ । मनमा उत्साह र विचारमा स्थिरताको कारण सबै कार्य सहजै सम्पन हुनेछ । सौन्दर्य र नयाँ वस्त्रको लागि धन खर्च हुनेछ । परिवारसंग खुसीसाथ समय बित्नेछ।
बोली र व्यवहारको कारण विवाद हुनसक्ने हुँदा सचेत रहनु होला । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ खास गरेर आँखा सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ। परिवारमा कलह बढ्न सक्छ । आय कम र खर्च बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।
दिन लाभदायक रहेको छ । व्यापार तथा व्यवसायमा लाभ हुनेछ । साथिहरु संग दिन रमाइलोमा बित्नेछ । विवाहको योग बनेको छ । आम्दानीका स्रोतहरु बढ्नेछन्। आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । आर्थिक योजना सहजै सम्पन हुनेछन् । रमाइलो यात्राको योग बनेको छ ।
कार्य क्षेत्रमा तपाईंको प्रभाव बढ्ने छ । तपाईंले गरेको कार्य सम्पन्न हुनाले उच्चअधिकारी खुशी हुनेछन् । काममा मनोबल बढ्ने छ । बाबु संगको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । साथै पिताबाट लाभ हुनेछ । जग्गा, सवारी साधन, सम्पत्ति सम्बन्धी काम गर्न को लागी अनुकूल दिन रहेको छ ।
दिन प्रतिकुल हुनेछ । मनाषिक तनाव बढ्ने छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउनाले थकान महसुस हुनेछ । नोकरी तथा व्यवसायमा उच्च अधिकारीबाट नकारात्मक व्यवहार हुनसक्छ। स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । साथी भाइको सहयोग मिल्नेछ ।
वादविवाद हुने योग बनेको हुँदा सचेत रहनु होला । शत्रु सक्रिय हुनेछन् सचेत रहनु होला । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। आकस्मिक धन लाभ हुनेछ। पुराना साथि भेट हुनेछन् । पढाइमा मन जानेछ । बाबुको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।
दिन मनोरन्जनमा व्यतित हुनेछ । साथि भाइसंग पार्टी तथा समारोहमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । राम्रो वस्त्र तथा वाहन प्राप्त हुनेछ । मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । खर्च बढ्ने छ ।
दिन अनकुल रहेको छ । घरको वातावरण सुखद रहनेछ। तपाईं शारीरिक रूपमा स्वस्थ र मानसिक रूपमा खुसी महसुस गर्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा समय प्रतिकुल हुनेछ । शुभ समाचार मिल्ने छ । प्रतिस्पर्धी माथि विजय प्राप्त हुनेछ।
आलस्य, थकान, कमजोरी को कारण शारीरिक रूपमा अस्वस्थ महसुस गर्नुहुनेछ। मानसिक रुपमा अस्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । मानसिक चिन्ता बढ्ने छ । व्यापार व्यवसायमा भाग्यले साथ दिने छैन । मनमा दुबिधा बढ्ने छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
जिद्धिपना बढ्ने छ । अधिक भाबुक हुनाले स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । सामाजिक रुपमा अपमानित हुने हुदा सचेत रहनुहोला । अचल सम्पतिको कारोबारमा सचेत रहनुहोला । आमाबाट लाभ हुनेछ। आर्थिक आयोजन सहजै सम्पन्न हुनेछन् ।
आवश्यक निर्णय लिनको लागि दिन शुभ रहेको छ । रचनात्मक शक्ति बढ्नेछ । दैनिक कार्य सहजै सम्पन्न हुनेछ । साथि भाइसंग रमाइलो यात्रा हुनेछ । भाइ बहिनिसंगको सम्बन्धमा मधुरता आउने छ । सामाजिक रुपमा मान प्रतिष्ठा बढ्ने छ ।
Previous articleनेपालसहित २६ देशका विद्यार्थीलाई तत्काल कोरिया प्रवेश नगर्न सुझाव
Next articleमेलम्ची बाढी अपडेट : थप सात घर बगायो